Telestream သည် OTT Streaming Media အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Telestream သည် OTT Streaming Media အတွက်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေသည်
နီဗားဒါးစီးတီး, California, နိုဝင်ဘာလ 19th -Telestreamမီဒီယာလွှင့်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနည်းပညာများတွင်ဖိုင်အခြေပြုမီဒီယာလုပ်ငန်းခွင်စီးဆင်းမှုကို ဦး ဆောင်သည့်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည် ABR streaming မီဒီယာများအတွက်မူရင်းအကြောင်းအရာအစဉ်အလာစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်သည့်စွမ်းရည်အသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။ iQ ABR ၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအဖြေများ။ OTT streaming ပံ့ပိုးသူများအတွက်အဓိကကျသောစိန်ခေါ်မှုနှစ်ခုမှာဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြော်ငြာဝင်ငွေမှအမြတ်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤနောက်ဆုံးထုတ်ဖြည့်စွက် Telestream iQ ABR ၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအဖြေတွင်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ၊ ထုတ်လွှင့်သူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားသူတို့၏ streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေ၊ ဖျက်နိုင်သည့်အရေးကြီးသည့်ပြissuesနာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်စေသောမရှိမဖြစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုပေးသည်။
TelestreamOTT ၏စောင့်ကြည့်မှုနှင့်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များသည် ဦး ဆောင်မှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအကြောင်းအရာပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်နှင့်အဆင့်မြင့်သောအသံနှင့်ဗွီဒီယိုဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသည့် codecs များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးသည်။ H.264 / AVC, H.265 / HEVC, AC-3 / Dolby Digital နှင့် E-AC -3 / Dolby Digital Plus သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလွယ်ကူသော Cloud Cloud ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကွန်ယက်စွမ်းဆောင်ရည်အပြင် OTT ၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည် streaming ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများ၏သိမြင်နားလည်မှုအရည်အသွေးကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ သင်သည်အဆောက်အ ဦး တွင်အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုကိုစီမံသည်ဖြစ်စေ၊ Cloud အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ နည်းပညာမိတ်ဖက်များကိုအသုံးချသည်ဖြစ်စေဤစွမ်းရည်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ချို့ယွင်းချက်များကိုသတိပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် OTT ၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားဗီဒီယိုနှင့်အသံအရည်အသွေးကိုပိုမိုမြင်သာစေသည်။ မီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖြင့် OTT ၀ န်ဆောင်မှုသည်ချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းနေသည်၊ ဗီဒီယိုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအသံအဆင့်များကအမှတ်အသားကိုထိမှန်နေသည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်” Telestream.
ကြော်ငြာထည့်သွင်းခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်နာကျင်ကိုက်ခဲသောအချက်ဖြစ်သည်။ streaming ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာထည့်သွင်းမှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှ OTT ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ကြော်ငြာများကိုအမှားအယွင်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများမှကင်းလွတ်စေရန်သေချာစေရန်ဖိအားပေးမှုများရှိနေသည်။ iQ Solutions သည်ကြော်ငြာများကို streaming ဒိုမိန်းတွင်တိကျစွာမည်သည့်အချိန်၌ရောက်ရှိသည်ကိုခွဲခြားဖော်ပြသည့်စုပေါင်း SCTE-35 သတင်းပို့ခြင်းဖြင့်စားသုံးခြင်းမှသည် Post-origin သို့ကြော်ငြာ၏မြင်သာမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
OTT ပါဝင်မှုကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Telestreamထုတ်လွှင့်နေသောဗီဒီယိုကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မဆို iQ ၏ဖြေရှင်းချက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင်သာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်တည်ဆောက်ထားသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်အချက်အလက်ဆက်စပ်မှုအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစစ်မှန်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အာရုံစိုက်သည့်အဖွဲ့များဖြစ်သည်” ဟု Driscoll ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဤတိုးမြှင့်မှုများကို iQ ABR ၏စောင့်ကြည့်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုယခုရရှိနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.telestream.net/iq/overview.htm.
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော OTT လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် virtual reality 2019-11-19
ယခင်: Calrec သည် Liberman ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်သည်
နောက်တစ်ခု: Pigmento သည် HDR Delivery အတွက် DaVinci Resolve Studio သို့ပြောင်းသည်